Raad Raac News Online – (Dhageyso) Beesha Tanade oo si Adag u dhaliishay habka Saami qeybsiga Puntland.
(Dhageyso) Beesha Tanade oo si Adag u dhaliishay habka Saami qeybsiga Puntland.
Moos Bukeeni July 6, 2017 Comments Off on (Dhageyso) Beesha Tanade oo si Adag u dhaliishay habka Saami qeybsiga Puntland.
Magaaladda Garowe ee Xarunta Puntland waxaa weli ka soconaya shir muhiim ah oo ay soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah salaadiinta Odaysha dhaqanka waxgaradka iyo dhalinyada Beesha Tanade oo ka mid ah Beelaha ku dhaqan Guud ahaan degaanada Pujntland.
Shirkan ayaa waxa lagu marti qaaday isimada dhaqanka puntland iyadoo muhiimada ugu weyn ee shirkan loo qabtay ay tahay sidii loo soo gudbin lahaa tabasho ay odayasha besha Tanade ka qabaan habka saami qeybsiga Puntland..
Odayaasha beesha Tanade ka soo jeeda ee shirkan ka qeybgalaysa ayaa isamada dhaqanka ee Puntland ay la kulan san yihiin waxay isoo jedinyeen talooyin la xeriira in la xaliyo tabashooyinka saami qeybsiga puntland.
Garaad cabdulaahi cali Ciid oo ah afhayeenka isimada dhaqan Puntland ayaa warbahinta la hadlay waxaana uu faah faahin ka bixiyay qodobdii ay hordhigheen odayaasha iyo salaadiinta beesha Tanade madama ay yihiin marjaca dalka
Sidoo kale Garaad Cabdullaahi Cali Ciid wuxuu sheegay in ay rajo wanaagsan ay ka qabaan in Isimada ay qeyb weyn ka Noqon doonaan sidii ay xal dhab ah uga gaari lahaayeen sidii loo xalin lahaa Cabasha Beesha Tanade ah .
Suldan Maxamed Jaamac Shire oo ah suldaanka beesha Tanade ee cabashada soo gudbisay ayaa dhankiisa sheegay ku qanac sanaan La aantooda habka saami qeybsiga puntland isagoo ka waramay rajada ay ka qabaan in la xaliyo cabasho ay soo jeediyeen…
Sidoo kale Suldaanka Beesha Tanade wuxuu sheegay in 24ka saac ee soo socday ay go aan dhab ah ka gaari doonaan sidii ay ka yeeli doonaan in ay ka sii mid noqdaan Dowlada Puntland Madaama ay weli wax tabanayaan.
Ma jiro wax go’aan oo ka soo baxay shirkan balse maalmaha soo socda waxaa loo balan san yahay in dib laysugu soo laabto go’amada shirkan ka soo baxayna war saxaafadeed lkaga soo saari doono…
Sanadii 1998dii ayay ahayd markii dhismaha Puntland lagu balamay in sadax sano gudahooda ay Puntland ka dhici doonto Doorasho Cod iyo Qof ah taasi oo an weli qabsoomin Madaama waqti badan ay ka soo wareegatay xiligaasi.
Qeyb ka mid ah Beelihii wax ku lahaa dhismaha Puntland aya qeybtood ku biiray Somaliland waxaana dhawaan Xubnaha Maamulkaasi ay dib u fureen Dastuurka Somaliland si xildhibaanada loogu kordhiyo Baarlamaanka,iyadoo Arintan la horgeeyay Golaha Wakiilada iyo Wasiirada Maamulkaasi.
Hase ahaatee Arintan ayaa waxay ku soo beegmeysaa iyadoo dhawaan Madaxweyne ku xigeenka Puntland uu sheegay in sanadka 2019ka aysan Puntland ka dhici doonin wax doorasho cod iyo qof ah sababo jira awgeed.
Hadalka Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa waxaa uu dhaliyay in beelihii wax ka dhisay Puntland ay xiligan xusul duub xoogan ugu jiraan in ay wax ku yeeshaan saamiga wax qeybsiga beelaha Puntland gaar ahaan kuwa aan si dhab ah uga dhex muuqan Awooda Xafiisyada Dowladda.